Ungalonyusa njani ubisi lwakho lwebele
Yintoni ekufuneka ndiyazi malunga nendlela amabele am enza ngayo ubisi?
Phambi kokuba lwenziwe ubisi oluvuthiweyo, umzimba wakho wenza inani elincinci lobisi lwebele olubizwa ngokuba yicolostrum. IColostrum luhlobo olukhethekileyo lobisi olunezakhamzimba ezininzi kunye neentsholongwane (iiproteni ezikhusela amajoni omzimba wosana lwakho). Ubisi uqobo luza kwehla malunga neentsuku ezi-2 ukuya kwezi-5 emva kokuba umntwana wakho ezelwe. Amabele akho angenza ubisi olwaneleyo kusana lwakho ukuba usana lwakho luyakwazi ukugcoba kakuhle kwaye uncancisa rhoqo kwaye rhoqo. Kukho izinto ezinokuchaphazela ubisi lwakho. Unokonyusa ubisi lwakho kwakhona ukuba linciphile.
Yintoni enokubangela ukuba ubisi lwam lwebele lunciphe?
Uncancise umntwana wakho rhoqo inokunciphisa ukuhambisa ubisi. Ubisi lwakho lwebele lunokuhla ukuba usana lwakho alukhupheli amabele akho ngokupheleleyo xa uncancisa. Usana lwakho alunakho ukukhupha amabele akho xa uncancisa ixesha elifutshane okanye umntwana wakho engakwazi ukubambelela ngokufanelekileyo. Amabele akho aya kuvelisa ubisi oluncinci ukuba kukho imfuno encinci.
Iziyobisi ezinje ngeepilisi zokulawula ukuzalwa, i-allergies kunye namayeza eentlungu anokunciphisa ubisi lwakho.
Uxinzelelo inokunciphisa ukuhambisa ubisi. Njengomama omtsha, usenokuba noxinzelelo olwandayo, uzive udinwe kakhulu, okanye ukhathazeke ngakumbi. Uxinzelelo lunokubangela ukuba uncancise umntwana wakho rhoqo okanye ixesha elifutshane.
Ukusetyenziswa kwecuba kunye notywala Inokunciphisa nonikezelo lwakho lobisi. Utywala kumodareyitha ukuya kwezixa ezikhulu unokunciphisa ubisi lwakho.
Utyando lwebele inokunciphisa ukuhambisa ubisi. Olu hlobo lotyando lubandakanya utyando lwebele lokufaka okanye ukwenza utyando ukunciphisa ubungakanani bamabele akho. Imithambo, imibhobho yesifuba, kunye namadlala emithi angonakaliswa ngexesha lotyando.
Yeyiphi imiqondiso yokuba ubisi lwam lwebele lunokuba sezantsi?
Umntwana wakho ubonakala ephulukana nobunzima.
Usana lwakho luneentsuku ezi-4 okanye nangaphezulu ubudala kwaye luba manzi ngaphantsi kweedilitha ezi-6 yonke imihla.
Usana lwakho luneentsuku ezi-4 ubudala okanye ngaphezulu kwaye lunokungaphantsi kokuhamba kwamathumbu amathathu ngosuku.
Usana lwakho lubonisa iindlela zokulamba rhoqo kunesiqhelo okanye lusebenza ngokungathi alufumananga bisi lwaneleyo emva kweseshoni yokondla. Kusenokwenzeka ukuba nawe awulali kakuhle.
Awuziva okanye ubone utshintsho emabeleni akho, njengokugcwala ngaphambi kokuncancisa kunye nokuthamba emva kokuncancisa. Ufanele ulubone olu tshintsho kwiintsuku ezintlanu emva kokubeleka.
Usana lwakho luba yinyongo (ulusu kunye namhlophe ngamehlo alo tyheli).
Ndingenza ntoni ukuze ndonyuse ubisi lwam lwebele?
Tyisa umntwana wakho izihlandlo ezisi-8 ukuya kwezili-12 ngosuku. Okukhona usancancisa, kokukhona amabele akho aya kwenza ubisi lwebele. Tyisa umntwana wakho xa elambile. Iimpawu zendlala zibandakanya ukubeka isandla sakho emlonyeni, ukwenza imisindo yokufunxa, kunye nokuhamba ngaphezulu kunesiqhelo. Kuya kufuneka ukuba uvuse umntwana wakho ukuba ancancise rhoqo de ubisi lwakho lonyuke. Musa ukuseta umda wokuba umncancisa ixesha elingakanani umntwana wakho. Vumela umntwana wakho ukuba ancancise ebeleni ngalinye ngalo lonke ixesha umtyisa.
Nceda usana lwakho lubambe ingono. Bamba i-nape yentloko yakho ukunceda i-latch esifubeni sakho. Chukumisa ingono yakho emlonyeni wakhe kwaye ulinde ukuba avule umlomo. Umlomo womntwana wakho osezantsi kunye nesilevu kufuneka uthinte i-areola (indawo emnyama ejikeleze ingono) kuqala. Nceda umntwana wakho abeke i-areola eninzi emlonyeni wakhe kangangoko kunokwenzeka. Kuya kufuneka uzive ngathi umntwana akanako ukohlulwa ngokulula kwibele yakho. Nciphisa ukutsalwa ngobunono kwaye ubeke umntwana wakho kwakhona ukuba umongikazi kuphela kwingono. Thetha nengcali yokuncancisa ukuba ufuna uncedo lokuncancisa usana lwakho.
Qinisekisa ukuba amabele akho awananto emva kweseshoni nganye yokondla. Veza ubisi lwakho ngempompo yebele emva kokondla umntwana wakho ukuze kube lula kuwe ukuba ubonakalise lonke ubisi. Impompo yebele inokwenza ukuba kube lula ukukhuthaza amabele akho ukuba enze ubisi oluninzi. Ukuthanjiswa kwebele kunokunceda ekuvuseleleni amabele akho kwaye wandise imveliso yakho yobisi lwebele. Veza ubisi rhoqo emva kweeyure ezi-2 ukuya kwezi-4 xa ungekho nosana lwakho. Ubisi olubonakalisiweyo lunokugcinwa lusetyenziselwe ukondla umntwana wakho kamva.
Ndingazikhathalela njani xa ndincancisa?
Landela isicwangciso sokutya esifanelekileyo. Isicwangciso sokutya esisempilweni sinika inani leekhalori kunye nezondlo ozifunayo ngelixa uncancisa. Umzimba wakho ufuna iikhalori ezongezelelweyo kunye nezondlo ukuze uhlale usempilweni kwaye uxhase imveliso yobisi lwebele. Isicwangciso sokutya esisempilweni siquka iintlobo ezahlukeneyo zokutya ezivela kuwo onke amaqela okutya. Ukwafuna malunga neiglasi ezi-8 ukuya kwezi-12 zolwelo suku ngalunye ukunqanda ukomelela emzimbeni kwaye uqiniseke ukuba ugcina ubisi lwakho lwebele. Sela into qho xa uncancisa ukwenza kube lula ukuba umntwana wakho afumane ulwelo olwaneleyo. Khetha ulwelo olungenayo icaffeine. Eminye imizekelo yotywala engenayo icaffeine ngamanzi, ijusi, nobisi. Buza ugqirha wakho ngolwazi oluthe kratya malunga nokuncancisa kunye nokutya kwakho.
Lawula uxinzelelo lwakho. Ukuphumla kunokukunceda ukunciphisa uxinzelelo kwaye uzive ungcono. Ukuphefumla nzulu, ukucamngca, nokumamela umculo nako kunokukunceda ujongane noxinzelelo. Thetha nogqirha wakho ngezinye iindlela zokulawula uxinzelelo.
Jonga ugqirha wakho ngaphambi kokuba uthathe naliphi na iyeza. Oku kubandakanya yonke imigqaliselo yonyango kunye neyeza. Amanye amayeza angadlula kubisi lwakho lwebele kwaye achaphazele umntwana wakho.
Musa ukutshaya. Inikotini idlula kubisi lwakho lwebele. Usana lwakho luchanabeke kwezi khemikhali ngobisi lwebele kunye nokuphefumla umsi wecuba. Sukusebenzisa i-e-cigarettes okanye icuba elingenamsi endaweni yecuba okanye ukuzama ukuyeka ukutshaya. Zonke ezi zinto zine-nicotine. Buza ugqirha wakho ngolwazi ukuba uyatshaya ngoku kwaye ufuna uncedo ukuze uyeke.
Nciphisa okanye uphephe ukusetyenziswa kotywala. Ukuba ukhetha ukusela utywala, ncancisa umntwana wakho ngaphambi kokuba usele utywala. Musa ukuncancisa usana lwakho ubuncinci iiyure ezi-2 emva kokuba usele isi-1. Isiselo esinye sotywala silingana nee-ounces ezili-12 zebhiya, ii-ounces ezi-4 zewayini, okanye ii-ounces ezi-1 zotywala.
Gcina ingxelo. Bhala phantsi ngalo lonke ixesha uncancisa usana lwakho naxa uveza ubisi lwakho. Nanini na xa uveza ubisi lwakho, rekhoda inani lobisi oluphumayo. Ungabhala phantsi qho xa umntwana wakho emanzi okanye emdaka kwi-diaper. Ingxelo inokukunceda kunye nogqirha wakho ukuba umntwana wakho ufumana ubisi olwaneleyo.
Ndingayaphi ukuze ndifumane inkxaso kunye nolunye ulwazi?
Isikolo samayeza okuncancisa
INew Rochelle, NY 10801
Ifowuni: 1- 914 - 740-2115
Ifowuni: 1- 800 - 990-4226
Idilesi yewebhu: www.bfmed.org
ILa Leche League yamanye amazwe
Indlela ye-957 North Plum Grove
ISchaumburg, IL 60173
Ifowuni: 1- 847 - 519-7730
Ifowuni: 1- 800 - 525-3243
Idilesi yewebhu: http://www.lalecheleague.org
Ndifanele ndiqhagamshelane nini nogqirha wam?
Usana lwakho luneentsuku ezi-4 okanye ngaphezulu kwaye lunokungaphantsi kokuhamba kwamathumbu amathathu ngosuku.
Umntwana wakho akafumani bunzima okanye ubonakala ngathi uyehla emzimbeni.
Usana lwakho lutyisa ngaphantsi kwamaxesha asibhozo ngemini okanye alubonakali ngathi lukutya ngokwaneleyo xa lutyisa.
Umntwana wakho unomdla ngakumbi kunesiqhelo okanye kubonakala ngathi akanamandla ngokwaneleyo okuncancisa.
Amabele akho awaziva egcwele okanye awaluvuzi ubisi lwebele kwiintsuku ezintlanu emva kokubeleka.
Ulusu lomntwana wakho okanye amhlophe wamehlo akhe ajika abe tyheli kwaye umbala otyheli uyanda.
Uziva udandatheke kakhulu.
Unemibuzo okanye unenkxalabo malunga nokuncancisa.
Unelungelo lokucwangcisa ukuba uza kumondla njani umntwana wakho. Ukukunceda kwesi sicwangciso, kuya kufuneka ufunde kangangoko unako malunga nokuncancisa. Buza ugqirha wakho malunga nokuncelisa. Ungathethana naye ngeyona ndlela ifanelekileyo yokondla umntwana wakho.Lolu lwazi lusetyenziselwa imfundo kuphela. Ayenzelwanga ukukunika ingcebiso ngonyango malunga nesifo okanye unyango. Jonga ugqirha wakho, umongikazi okanye usokhemesti ngaphambi kokulandela nayiphi na irejimeni yonyango ukubona ukuba ikhuselekile kwaye iyasebenza na kuwe.
I-2 ipilisi ebomvu
idosi ye-amoxicillin yomqala womqala
Elona xesha lilungileyo losuku lokuthatha iflonase
I-zithromax yonyango lwe-chlamydia
I-mirena vs iud yobhedu